Maxaad ugu qasban tahay inaad ku kala fogaato lammaanahaaga hortooda? - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Maxaad ugu qasban tahay inaad ku kala fogaato lammaanahaaga hortooda? - CAAFIMAAD PLUS MAG
Dib-u-fiirinta asxaabteena ka socda HuffPost, Falanqeyntan ku saabsan fartu waxay siinaysaa cabbir cusub oo ku saabsan gaaska. Marka loo eego aragtiyahaas, mar dambe ha ka baqin gaaska xitaa wuxuu xoojin karaa guurka. Xaaladaha qaarkood, tani waxay dhaawici kartaa lammaanaha.
Ceeb ku sii socota qaangaarnimada
Haddii aan ka xishooneyno inaan ku hor marno lammaanaheenna, xitaa si shil ah, waa sababta oo ah waxaa jira cuqdad maadadan laga soo bilaabo carruurnimadiisii. Shannon Chavez, cilmi-nafsi yaqaan iyo cilmi-nafsiga ku xeel-dheer. Fartu waxaa loo arkaa inay tahay wax karaahiyo ah, wasakh ah, ur leh oo aan soo jiidasho lahayn haba yaraatee "waxay tilmaamaysaa khabiirka ku darsaday inuu sii jiro xitaa marka uu weynaado gaar ahaan xiriirkeena. Iyada iyada, aaminaadani waxay khuseysaa marka qof uu dareemo in la xakameynayo ama laga xishoodo fikradda kaliya ee ka hor tagga lammaanahooda. Si kastaba ha noqotee, lammaanaha ku dhiirrada inay qaadaan tallaabada ah inaanay mar dambe ku sii murgin mowduucan ma ahan kuwo leexleexan Hase yeeshee, way sii xoojin karaan midowgooda mahadnaqa gaaskan.
"Tani waa calaamad caafimaad leh"
Gary Brown, daaweeyaha guurka iyo qoyska wuxuu ka saarayaa xannibaadda ku hartay lamaanaha ee la xiriira gaaska. “Waa calaamad caafimaad oo muujineysa in aad isku kalsoon tihiin oo aad is khilaafsan tihiin,” ayuu yidhi. Dhakhtarka cilminafsiga, lammaanaha aan ka xishoonayn inay midba midka kale ka yeelaan xitaa waxay ku sii buuxsami karaan sariirta. Gaar ahaan markaad ogtahay in galmadu tahay xabagta lamaanaha. Lammaanayaasha farxadda lihi khaladaadkan ma sameeyaan xilliga galmada. Marka laga hadlayo farta, khabiirka ayaa sharxaya in tani ay ugu wacan tahay aqbalida jirkiisa iyo ifafaalehan dabiiciga ah. "Qofku waxay u badan tahay inuu ka faa'iideysto noocyada kala duwan ee kicinta iyo inuu galmo la yeesho xakameyn yar, cabsi iyo amni-darro" ayuu yidhi Shannon Chavez oo ku baaqaya in caadi laga dhigo fartu. In kasta oo tani ay xoojin karto horumarka lamaanaha, haddana caadadani waxay liddi ku noqon kartaa waxyeello u leh xiriirka jacaylka.
"Tani waa tusaale ixtiraam la'aan"
Inkasta oo khabiirada qaar ay isku raacsan yihiin in aysan jirin wax qalad ah oo lagu kala fogaado lamaanahaaga hortiisa, kuwa kale ma bixiyaan sheeko isku mid ah. Tani waa kiiska Kurt Smith, daaweeye ku takhasusay la-talinta ragga. Wuxuu qirey in caadadani mararka qaar astaan ​​u noqon karto biseylka iyo aqbalaada xiriirka laakiin ay jiraan waxyaabo ka reeban. "Aynu nidhaahno haddii lammaanahaagu ku faro hortaga oo aad u sheegto taas oo kaa dhigaysa mid aan raaxo lahayn, waxay muujineysaa inuusan tixgelinaynin waxaad rabto. Waa calaamad xun, ”ayuu falanqeeyay. Isaga ahaan, ka hor tagista lammaanihiisa aan raaxo lahayn ma aha dhaqan caafimaad leh. "Tani waa tusaale ixtiraam la'aan ah oo ka muuqan karta dhinacyada kale ee xiriirka" ayaa ka digay lamaanaha takhasuska leh. Hadday fartu ur xun tahay, waa inaad isku daydaa inaadan keligaa ceshan maxaa yeelay waxay u fiican tahay caafimaadka.
Isgaadhsiintu waa furaha
Gunaanad: ma jiraan wax dhib ah oo lagu kala fogaado inta ay wada-hawlgalayaasha oo dhami ku wada qanacsan yihiin. Marka tani aysan ahayn kiiska, waxaa muhiim ah in si hufan looga dhex muuqdo muujinta muuqaalka ifafaale dabiiciga ah ee laga yaabo inuu yeesho, kan kale, inuu ku sii jiro asturnaanta. Kaliya isku day inaad mawduuca soo qaadatid xukun la’aan si loo yareeyo xishoodka, ”ayuu kula taliyay Gary Brown. Wuxuu sidoo kale soo jeedinayaa inaad la wadaagto qofka kale in fartu ay qasayso dareenkaaga oo aad ku dhibto inaad maqasho oo aad dareento.
Dareemida fartanka lamaanahaaga ayaa kuu fiican adiga
Marka laga soo tago xoojinta xiriirka aad la leedahay lammaanahaaga sida takhasusayaasha qaar ay u maleynayaan, fartu waxay lahaan kartaa wanaagsanaan ka baxsan wanaaga lamaanaha. U oggolow socodka gaaskaagu wuxuu kaa caawin karaa inuu qofka aad jeceshahay caafimaad qabto. Tani waxbarasho oo lagu daabacay joornaalka Isgaarsiinta Kiimikada Caafimaadka ayaa cadeyneysa inay kordhin karto cimriga qofka dareemo. Iyo sabab wanaagsan, sida laga soo xigtay cilmi-baarayaasha hydrogen sulfide ayaa faa'iido u leh ka hortag waxyeelada mitokondria- kuna xidhan gabowga unugyada. Dr. Mark Wood, Agaasimaha Cilmibaarista ayaa taageeraya ifafaalahaan. "In kasta oo hydrogen sulfide la ogyahay inuu yahay sun, urta urta urta ukunta qudhunta iyo xaaska, si dabiici ah ayaa jirka looga soo saaraa runtiina wuxuu noqon karaa geesi caafimaad," khabiirka ayaa ku wargaliyay. Marka loo eego gabagabada, kan dambe wuxuu ka hortagi karaa cudurro badan oo ay ka mid yihiin xanuunnada wadnaha iyo xididdada. Haddii aad ku dhex gasho dadweynaha cabsi darteed maxaa yeelay waxaad leedahay gaas, waad la dagaallami kartaa cudurkan ku xiran dheefshiidka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.santeplusmag.com/pourquoi-faut-il-peter-devant-son-partenaire/
TELES RELAY 40669 posts 1 comments
03 qof ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday dukaanka qoryaha ee Louisiana
DHACDOOYINKA IPUPA DIIWAAN GELINTA AMA jacaylka muusikada ka hor CONGO? - Video
berri, dagaalka? - Dhalinta Afrika